Moqdisho-Somalia | Voice Of Somalia
Category Archives: Moqdisho-Somalia
WARBIXINO TAXANE AH-Muqdisho Busaarad iyo Baagamuundo aan hore loo arag,
Lasoco Q.3-aad insha’allaah
Mid kamid ah Wargeysyada ugu afka dheer leh Waddanka Ugandha ayaa boggiisa hore cinwaan uga dhigay Booliska Ugandha iyo Xeebta Tumashada ee (Liido), Waxana uu Wargeysku ka hadlayey farqiga u dhexeeya Ciidamada Milatariga Ugandha ee Soomaaliya jooga iyo kuwa Booliska ah ee magaalada Muqdisho loo geeyay in ay ka qeyb qaataan sugidda Amniga magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Wargeyska ayaa sheegay in Milatariga Ugandha ee Soomaaliya jooga ay howl adag hayaan Maalin walbana ay dhacdo in Dhimasho ama dhaawac ay kasoo gaarto Dagaallada ay kula jiraan Kooxda Alshabaab, Iyagoo weliba aanan si toos ah u helin Mushaaraadkooda oo sisuuq madow ah Mushaarkooda loo lunsado, Halka Booliska jooga magaalada Muqdisho ee magaca AMISOM ku jooga balse dhammaantood ah Ugandheys ay siRaaxo leh lacagtooda ku qaataan, Iyagoo aanan wax howl ah qaban, Mushaarkoodana aanan laga musuqmaasuqin.
Wargeysku waxa uu sheegay in Booliska AMISOM ee waddanka Ugandha laga qaaday oo isugu jira Rag iyo Dumar ay Maalin walba tamashleyn iyo dabaal u tagaan Xeebta Liido, Iyadoo sida Wargeysku sheegay ay qaarkood qaarka kale waardiyeeyaan inta ay dabaalayaan ama ku raaxeysanayaan Xeebta. Waxana uu Wargeysku falanqeeyay in Booliskaas ay qeybba Maalmo ku raaxeystaan Xeebta Liido, halka qeybaha kalena ay waardiyo ka hayaan qeybta Maalintaas xeebta ku raaxeysaneysa.
Warbixintan uu Wargeyskaas soo qaatay ayaa kusoo aadeysa kadib Maalin qura markii Waxgaradka Muqdisho ay walaac ka muujiyeen Fisqiga iyo Fal-falxumada ay Ciidamada Booliska AMISOM lasoo aadaan Xeebta Liido, Waxana ay Odayaashu aad uga hadleen oo ay arrin aan la aqbali karin ku tilmaameen Qaawanaanta ay Badda ku yimaadaan Dumarka iyo Ragga Ugandheyska ah, Iyagoo Hub culus oo ay isku waardiyeynayaanna Badda lasoo aada.
Waxgaradka Muqdisho ayaa Warbaahinta u sheegay in Madaxda Dowladda ay kala hadleen Fisqiga ay Ciidamada AMISOM ka wadaan Xeebta Liido, Balse Nasiibdarro aysan wax jawaab ah ka helin Madaxda.
Arrimahan oo dhan ayaa kusoo aadaya Xilli Hay’adda Human Rights Watch ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha ay Maalmo kahor wax ka qortay Kufsi baahsan oo ay Ciidamada AMISOM ku hayaan Haweenka Soomaaliyeed, Iyagoo adeegsada Muqalasiin Soomaali ah oo xeryahooda ugu geeya Haweenka ay kufsanayaan.
DHAGEYSO:-Sheekh Cali Katiin”Shacabka Muqdisho haka qiiroodaan Gumeysiga iyo Dhibaatada lagu hayo”
Sheekh Cali Katiin oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay dhibaatooyin laba jibaarmay ee ciidanka dowlada iyo shishuuyuhu kula kacayaan shacabka Muqdisho.
Dadka Muqdisho waxay ahaayeen kuwa ka qiirooda gumeysi kasta oo kaga yimaada shisheeyaha,waxay iska celiyeen oo ay iska saareen Itoobiya’ayuu yiri sheekh Cali katiin isagoo ugu baaqay shacabka inay iska dulqaadaan Ciidamada heysta.
Sheekh Cali ayaa sidoo kale dardaaran Muhiim ah ujeediyay Ganacsatada ku dhaqan Suuqa bakaaraha oo ku dhaqaaqay gadood ka dhan ah dowlada.
DHAGEYSO:-Xildhibaan Cabdi wali Qanyare “Ciidanka Nabadsugida ayaa isku dayay inay i dilaan iyagoo igu soo Weeraray Gurigeyga”
Posted on August 11, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Maleeshiyaadka Dowladda ayaa weerar ku qaaday guri uu ku sugnaa Xildhibaan Cabdi wali Maxamed Qanyare oo kamid ah xubnaha baarlamanka.
Cabdi wali Maxamed Qanyare ayaa la hadlay saxaafada Muqdisho isagoo sheegay in xalay uu ka badbaaday isku day dil oo ay soo maleegeen ciidanka nabadsugida dowladda.
“Waa Arin layaab leh in ciidanka nabadsugida ay soo weeraraan qof xildhibaan ah, waxay damceen in xoog ku soo galaan gurigeyga iyagoo doonayay inay idilaan”ayuu yiri Xildhibaan Cabdi wali Maxamed Qanyare.
Wuxuu sheegay ciidanka nabad sugida inay burburiyeen gawaari guriga tiilay iyagoo waxyeelo ugeystay dhismaha Guriga.
Dhanka kale ciidan kale oo katirsan Nabadsugida ayaa weeraray Cabdi Nuure siyaad iyagoo isku dayay inay gacanta kusoo dhigaan.
WARBIXIN:-Shalay Dable, Maanta Korneel,Berrina Jeneraal,Musuq Maasuq Dhanka Darajooyinka Ciidan ah oo VILLA SOMALIA Kajira!
Posted on August 10, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Musuq Maasuqa dhanka maaliyadda ah oo ay ku dhaqaaqaan saraakiisha Dowladda Federaalka ayaa caadi iska ahaa sanadadii lasoo dhaafay tallaabadaasi oo xagal daacin weyn ku ah taliska kartoonka ah ee Villa Somalia.
Wax isdabamarintu kuma ekaan oo kaliya dhaqaalaha iyo hubka ee waxay saameysay darajooyinka ciidanka waxaana dhacday in si fowdo ah darajooyin ciidan laysku siiyo.
Col.Cabdi Kariim dhegabadan oo horay u ahaa abaan duulaha ciidanka DF-ka ayaa 5 bilood kadib markii uu xilkaasi hayay isku dalacsiiyay Jeneraal waxayna saxaafaddu ugu yeeri jirtay “Jeneraal dhega badan”.
Daahir Aadan Cilmi Indho Qarshe waa taliyaha guud ee ciidanka Melleteriga DF-ka wuxuu ka qeylla dhaamiyay darooyinkan bugta ah ee lagu tixayo askarta iyo saraakiisha.
Indho Qarshe oo ragga wararka fidiya kula hadlayay Muqdisho ayaa qiray in boqolaal askar dablayaal ah ay si lama filaan ah isugu rogeen Korneel,Gaashaanlle illaa ay gaareen darajada Jeneraal!.
“Waxaan sameynay baartaanno aan ku ogaannay in 400 oo askari oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ay haystaan darajooyin la been abuuray. Arrintan waxaan u xilsaarnay guddi warbixintii ay keennanna waxaa hor-dhigi doonnaa golaha wasiirrada xukuumadda Soomaaliya”ayuu yiri Indho Qarshe.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in musuq maasuqa dhanka darajooyinka ciidanka ah ee kajira dowladda Federaalka uu meel xun gaaray.
Qaadashada darajooyinka ciidanka ayaa ubaahan dadaal dheeri oo dhanka khibradda melleteriga ah iyo ilaalinta xeerarka ciidanka waxaana xusid mudan Dowladda Federaalka in aysan laheyn ciidan akhlaaq leh oo uqalma darajada ay hadda sheeganayaan waa Mooryaan kufsada dumarka islamarkaana isbaaro u dhigtay shacabka.
DF-ka malahan ciidan akhlaaq wanaagsan leh waana maleeshiyaad qabaa’illada lagasoo aruuriya waa dabadhilifyo ka hoos shaqeeya shisheeyaha duullaanka gardarrada ah kusoo qaaday dalka Soomaaliya.
DHAGEYSO:-Abwaan Taakow oo Tiriyay Gabay cusub oo lagu magacaabo “BARYO”
Posted on August 6, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Taakow Macallim Ciise oo kamid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa tiriyay gabay cusub oo waaqici ah kaasoo wax yaabaha uu taabanayaahi ay kamid yihiin gumeysiga lagu hayo, Soomaaliya, Falastiin iyo arimo kale.
Gabayga oo loogu magac daray “Baryo” ayaa waxaa kale oo ka dhex muuqanaya duco si Allaah uu ummada Muslimiinta ah uga dul qaado dulliga iyo gumeysiga ay maanta ku hoos nool yihiin.